ICappuccino kunye namaxoki okupakisha | Martech Zone
NgoMvulo, nge-12 kaJanuwari, 2009 Douglas Karr
Kwiveki ephelileyo ndimise iMcSkillet burrito endleleni eya emsebenzini. Ndingabhala iposti nje ngendlela endizithanda ngayo ezo kunye ne-Qdoba burritos yesidlo sakusasa, kodwa ndiza kukusindisa. Ngelixa ndandise McDonalds, umdla wam wokufuna ukwazi wandigqwesa kwaye ndayalela iMcCafe Mocha kunokuma kwam Ivenkile yekofu oyithandayo.
Imibala, imiqondiso ephucukileyo kunye nokupakishwa ngeetoni zomhlaba zikujikelezile kwaye zikwenza uzive ngathi unyukela kwikhefi yaseYurophu. Awukho, nangona kunjalo. Ndijonge ngononophelo njengoko umntu osemva kwekhawuntara ecofa amaqhosha alungileyo, evuselela imixholo, kwaye ndicofe isiselo nge-cream eqhwethayo kunye ne-chocolate.
Ndifikile emotweni, ndathatha isiphuzo sam sokuqala, kunye ne… blech. Andiqinisekanga ngento eyenzekileyo, ndiyakholelwa ukuba bekukho ukungasebenzi kakuhle kumatshini okanye enye into, kodwa ibingcamla njenge-shots esibi esigqunywe nge-cream eqhwatyiweyo. Ndingaphantse ndesisu nayiphi ikofu (bendikumkhosi wamanzi ngenxa yokulunga), kodwa kuye kwafuneka ndiyilahlile. Ewe, iqela labo belingazi ukuba kukho ingxaki nokuba yeyiphi na - nangaphantsi kokuba beyazi inyama yenkomo elungileyo. 😉
Sinakho Starbucks ezantsi ukusuka emsebenzini wam, ke kunzima ukuba ikofu yekhofi idlule. Ndiyithanda kakhulu isiraphu yepepermint… kanye njengokuba ookhokho bethu bafumanise ukuba iCoca-Cola inecocaine, ndiyoyika ukuba ngenye imini siyakufumanisa ukuba i-Starbucks Peppermint inento engekho mthethweni kuyo.
I-Starbucks ine-logo ecacileyo, necocekileyo eyayidla ukuxelela abantu abakungqongileyo ukuba, "Ndinemali kakhulu kangangokuba ndingachitha iidola ezi-4 kwezinye iimbotyi ezitshileyo.”(Abanye abahlobo bam bayayibiza njalo Iibhokhwe ezine). Awu, i-icon yenkcubeko eyayiyi-Starbucks sele iqalile ukuphela. Andifane ndibethe imigca emide kwaye ndinokuyidlula i-Starbucks ngokulula nje ngeSitishi seGesi esine-coffee stand. Indebe isabukeka kwaye iyahluka, nangona kunjalo.
Ngasekhohlo, mhlawumbi, ikofu yam endiyithandayo kuzo zonke. Abahlobo bam abalungileyo uJason noChris baqhuba ivenkile enkulu yekofu, Indebe yeembotyi ngekona ekhayeni lam.
Ikofu ingeniswa kwivenkile yekofu eHamilton, e-Ontario. Yonke into ephungwayo, nokuba ichithwe i-decaffeine, isagudile kakhulu, isityebi kwaye ikhrim. Kunzima ukuchaza umahluko wokuba ubhontshisi obusiweyo, umhlaba, ubhontshisi kunye ne-steamed unokuvelisa ulwelo olunqabileyo kunye nomphunga onomphunga omnandi. Ibaristas e Ivenkile yokuthengisa ikofu eIndianapolis ngokucophelela ukulinganisa kunye nexesha ngalinye lokudubula ukuqinisekisa ukuba incasa yalo iyandiswa. Rhoqo, ndiyababona belahla kwaye baphinde baphinde baphinde basebenzise iimbotyi bade badutyulwe ngokufanelekileyo-ngamanye amaxesha ukufuma kunokudlala ingozi.
Azixabisi kangako ii-Starbucks kwaye zingcono kakhulu (ngokucacileyo zibhetele kuneMcCoffee), kodwa ke indebe icacile kwaye imhlophe. Akukho nto ikhethekileyo… ngaphandle kwa ngaphakathi. Yile nto ndizele ukuyithenga, andithi? Mna do hlawula amava anikezelwa yivenkile, nayo! Uninzi lwegumbi, ngaphandle kwamacingo ngaphandle kwentambo, kunye nezinye izihlalo ezifanelekileyo.
Oo, ubuxoki bokupakisha! Andikwazi ukucinga ukuba iMcDonalds ichithe malini ukuzama ukwenza ukuba ikomityi ibonakale ngcono ngaphandle kwendebe.
tags: UJason uyawaindawo yespf ezininziirekhodi le-spf ezininziIarhente ye-ppcukubuyisela kwakhonaukubonwa kwespfirekhodi le-spfirekhodi lokujonga ireferensiImdidlalo eqhubayo yeTV
Jan 12, 2009 ngo-11: 40 PM
Ndingayiphatha ikofu embi nayo, kodwa ndiziva ngathi ndingumama kaMotrin. Ndixhomekeke eStarbucks kuba yeyona ndawo ndinokuya kuyo ngekhefu elishushu kwaye inezihlalo ezifanelekileyo ebusika. Imigca iyancanca, ikofu ayisiyonto intle kwaye iatmosferi iya isiba mbi ngabantwana abalekayo njengezilwanyana zasekhaya.
Ezilungileyo, iivenkile zekofu ezizimeleyo zinqabile kakhulu kwezi ndawo. Kodwa, ndinabambalwa kwaye ndiyabaxhasa kakhulu. Phila indebe engaphawulwanga!
Jan 12, 2009 ngo-11: 47 PM
Ngaba ukhe wakhangela Iivenkile zekofu zaseIndie? Mhlawumbi kukho enye ekufutshane kunokuba ucinga!
Jan 13, 2009 kwi-8: 51 AM
I-FYI: Kwi-Starbucks kwi-Broad Ripple, enkulu (i-venti) ikofu yinto engaphezulu kwe- $ 2.00. Imenyu ye-Bean Cup ekwi-Intanethi ithi iyafana $ 1.55. Ndicinga ukuba iincwadana ze- $ 4 indebe zivela kwiimarike ezinje nge-NYC.
Kodwa, iposti enkulu uDoug!
Jan 13, 2009 kwi-11: 03 AM
Nam, ndazama iikhofi zikaMcBlech. Khange ufumane ukungasebenzi kakuhle. Ndiyayazi lonto ngoba ndibanike amathuba amathathu. I-latte enye ebandayo ene-caramel. Itreyini enye eshushu. I-mocha enye eshushu. Ndamangaliswa yindlela ezimbi ngayo. Ukuba ndifumene ikofu embi kwivenkile yekofu, bendiya kuyibuyisela kwaye ndibaxelele ukuba baphinde bazame.
Ndingothuka kakhulu ukuba nabani na uqhele ukusela ikofu yokuthenga ikofu unokutshintsha. Isisombululo sam: Ndithenge umgangatho onesidima, kodwa umatshini we-espresso ongabizi kakhulu. Into mhlawumbi ihlawulelwe yona ngenyanga okanye ezimbini. Ngoku ndenza eyam kanye kanye indlela endifuna ngayo ngenxalenye yeendleko. Uyayazi into abayithethayo ngehagu enxibe.
U-Yael K. Miller
Jan 13, 2009 ngo-2: 04 PM
Ndikufumene ngenxa @ swoodruff's ezintlanu kusasa.
Andinguye umntu osela ikofu kodwa ndingumntu osela iti kwaye kukho iindawo ezithile ezine “tea” egameni labo kodwa zinuka iti.
Ndifuna ukwazi, awuziva kuyimpazamo yokuthengisa ukungabinayo ilogo kwikomityi yakho yekofu?
Masithi umntu u-X uswele kakhulu ikofu, badlula umntu Y ephethe ikomityi yekofu. Umntu X ubuza ukuba uMntu Y uyithathe phi ikofu. Mhlawumbi umntu X akalunganga ekunikezeleni umkhombandlela, mhlawumbi uMntu Y akanalo ulwalathiso, mhlawumbi uMntu Y akasithethi kakuhle isiNgesi, ke uMntu Y unengxaki yokufumana ivenkile yekofu. Ukuba ikomityi yekofu engenanto ibinophawu loMntu uY ebeya kukwazi ukuba ajonge ntoni.
Masihambise umzekelo kwiwayini. Ndikhumbula amagama ezinye iwayini kodwa ayizizo zonke. Xa ndiyokuthenga iwayini, ndiye ndijonge iilebheli eziqhelekileyo.
Ndiyakholelwa ukuba iilogo zibalulekile kwaye kuyimpazamo ukungayitshisi imveliso yakho kunye nelogo yakho.
Jan 13, 2009 ngo-8: 30 PM
Ukuba ngabahlobo beNdebe yeMbotyi, ndiqinisekile ukuba abanalo uphawu ngenxa yexabiso leekomityi. Bakhetha ukuchitha imali kwiimbotyi ezinkulu kwaye ndiyabulela ngayo!
Enkosi kuSteve ngokukhankanywa kwaye ndiyathemba ukuba uza kubuya kungekudala!
Jan 14, 2009 kwi-12: 00 AM
Iphi le ndebe yeembotyi uthetha ngayo? 😉
Jan 14, 2009 ngo-11: 44 PM
Inqaku elinomdla kakhulu. Ukuba ngumlandeli wevenkile oyithandayo yekofu kuyenza ibe nomtsalane nangakumbi. Ndiyavuma, ndicinga ukuba ilogo inokunceda iNdebe yeembotyi, kodwa ndicinga ukuba ayizifanelanga iindleko zokwenza oko. Kumzekelo ongentla, ndicinga ukuba uMntu Y angalula kwaye akhawuleze azise uMntu X ukuba bayifumene phi ikomityi yekofu kunye nendlela yokufika apho. Nditsho kuba into enye endiyaziyo kukuba ndenze kanye loo nto izihlandlo ezininzi.